कर्णालीपछि प्रदेश–२ मा सर्‍याे नेकपा विवाद
PSJTV प्रकाशित: 2077-7-12 गते
काठमाडौं : प्रदेश–२ का गाउँपालिकामा पार्टी कमिटी गठन र सपथ ग्रहण विवाद चर्किँदै जाँदा नेकपाका केन्द्रीय नेताबीच पनि रस्साकस्सी देखिन थालेको छ ।
बिन्दबासिनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । म यो अवाज जोडतोडका साथ उठाइरहेको छु । तर, मलाई नै केही मान्छे दोषी करार गर्न खोज्दै छन् । जबकि, म घटनास्थलभन्दा १५ किमि टाढा वीरगन्जमा थिएँ । यति टाढा भएको मान्छे कसरी घटनामा संलग्न हुन्छ ? झडप भएको मैले सुनेँ । घाइते भएको पनि थाहा पाएँ । मैले त उद्धारका लागि एम्बुलेन्स पठाएँ । उपचार गरेँ । अनि म कसरी दोषी भएँ ? नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामी, शुरोजंग पाण्डे र तिवारी यादवले लेखेका छन् ।